जे खाएं त्यही ओकलें-Nagarikaawaj.com
जे खाएं त्यही ओकलें
मान्छे यति बिध्न साँढे किन हुन्छ हँ ? के उसको यो प्रवृत्ति हो ? उसको यो मानवता हो ? ठीक छ साधारण मान्छेले साँढे प्रवृत्ति देखाए त ठीकै छ अबुझ हो भनौंला । तर नेपाल सरकारको बर्दी भिरेर (नेपाल प्रहरी) साधारण जनतामाथि बिना आधार, बिना कारण साँढे प्रवृत्ति देखाउनेलाई के भन्ने ? कि त ऊ पागल हो । कि त सन्की हो ।
सायद लाग्छ हिँजोसम्म म कुनै राजनैतिक कुरामा आधारित रहेर लेख लेख्थें होला, सोही आधारमा तर्क वितर्कहरु गर्थें होला, अथवा अरुको जिन्दगी र जीवनका अनेकौं रहस्यका पाटाहरु खोलिदिन्थेँ होला, तर आज यस्तो परिस्थिति मेरा सामु एकाएक आइदियो कि म आफै बाध्य भएँ आफ्नै बारेमा लेख्न ।
गाउँबाट मेरो मोबाइलमा एकाएक घण्टी बज्यो । त्यो चाँहि गाउँबाट साथीहरुको थियो । तीनजना गाउँका दाइहरु लोकसेवा आयोगले खुलाएको वन क्षेत्रको जनरल फरेष्ट्री पदको लागि बुटवल आउने कुरा फोनबाट थाहा पाएँ । निकै खुशी भएँ । गाउँबाट साथीभाइहरु हाम्रो बुटवलसम्म आइपुग्दा निकै रमाइलो हुने कुरामा दुइमत थिएन । म क्याम्पसबाट त्यो दिन अथवा यही असोज १४ गते ठीक ११ बजे फर्किएको थिएँ । डेरामा नपुग्दै बाटैमा दुईजना आइपुगेका रहेछन् र अर्को चाहिँ घरबाट आउँदै रहेछन् । गाउँका दाइहरु हुन केही त खुवाउनै प¥यो भन्ने सोंचे । नास्ता बनाएर ख्वाएँ । उनीहरु केही पछि त्यहाँबाट निस्किए । लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा निकै भीड रहेछ । उनीहरु दुइजना र आउँदै गरेका अर्का दाइ गरेर तीनजना पुनः मेरो कोठामा आइपुगे । किन यति चाँडो भयो र ? लोकसेवामा त निकै भीड हुनुपर्ने हो होइन र ? मैले उनीहरुमाथि कोठाभित्र पस्न नपाउँदै प्रश्नको झटारो हानेँ । एकजना दाइले गाउँले लबजमा फुत्काइ छाडे ‘‘एत्राको चाँडै हुने हो, प्याक प्याक भीड छ । आज सम्भव छैन । भोलि तैंले गएर भरिदिएस् । ’’
म अक्न न मक्क परेँ । भोलि त १५ गते हो । १५ गते विहानभरि क्याम्पसमा हुन्छु । फेरि क्याम्पसबाट आएपछि १७ गतेको तयारी गर्नुछ । १७ गते कपिलवस्तुमा गजल उत्सव थियो । उक्त कार्यक्रमको लागि बुटवलबाट म र केशव ढुंगानालाई निम्ता आएको थियो । फेरि दाइहरुले भनेको नमानेमा त झन् कठिन अवस्था । गाउँका दाइहरु हुन के थाहा । साथीहरुसँग गएर अनीलले यति पनि गरेन यार । उसले घमण्ड ग¥यो भनिदिए भने पनि त गाहै्र हुन्छ । ठीकै छ बुझाइ दिउँला भने । यति कुरा मेरो मुखबाट सुनेपछि उनीहरु खुशी भए केही समयको बसाइपछि तिनैजना घर तिर लागे । ठिकै छ अब भोलि क्याम्पस नगएरै भएपनि फारम भरिदिनुपर्ला भन्ने लाग्यो ।
अर्को दिन असोज १५ गते एका विहानै उठेँ । हतार हतार खाना पकाएर खाइसकेपछि म ९ बजे लोकसेवा आयोगको कार्यालय अगाडि हाजीर हुन पुगें । १५ गते यति विध्न भिड थियो । सायद अन्यत्र यस्तो भिड कमै देख्न पाइएला । त्यहाँ त्यो समय धेरै मान्छेहरुका अनुहारहरुमा मेरो प्रतिविम्ब ठोकिन गयो । मेरो प्रतिबिम्बले त्यहाँ धेरै आफ्ना साथीहरु दाइभाइहरु र आफन्तीहरु देख्न पुग्यो । लाग्यो आज रमाइलो हुने भयो । सबै साथीहरुसँग भेटघाट हुने भयो । तर एक मनले लाग्यो कतै चिनेका मान्छेहरुले मलाई पनि जनरल फरेष्ट्रीमा फारम भर्न आएको भनेर गलत सूचना त पाउँदैनन् । मेरो लागि नभएर दाइहरुको लागि भएको कारण म निर्धक्क भएँ । यत्तिकैमा म लाइनमा बसी रहेको अवस्थामा एक जना बारी नाम गरेका हामी सँगै वि.एस्सी तेस्रो वर्षमा एउटै सेक्सननमा अध्ययन गर्ने मधेशी साथीले बोलाए । साथीले बोलाएसकेपछि म त्यो लाइन पनि छोडिदिएँ र उनको फाराम भर्नमा सहयोग गरिदिएँ । त्यहाँनिर एकसे एक गरि ७,८ जना अन्य साथीहरुले पनि फाराम भरिदिए । त्यहाँ रहँदै गर्दा हाम्रा सहयात्री साथीहरु अनेरास्ववियूका शेषकान्त पोखरेल, कृष्ण घिमिरे लगायत अन्य विभिन्न संगठनका साथीहरु त्यहानिर जम्मा भयौं, र आज फारम भर्न नसकिने अवस्था देखेर दोब्बर दस्तुर लगाएर भोलि भर्ने हामीहरुले निर्णय लिएका थियौं ।
अन्तिम पटक एक पटक प्रयास गरौं न भनेर हामी गेटको नजिकै पुग्यौं । त्यहाँ थुप्रै साथीहरु थिए । लाग्छ उमेरको हिसाबले सबैभन्दा सानो म नै थिएँ होला । फेरि (यहाँ अचाक्ली गरेर पेलम पेल पनि थिएन । अवस्था सामान्य मान्नुपर्छ । एकजना डण्डा बोेकेको नाम उसको सन्देश भण्डारी (गुल्मी, भनभने रहेछ ) उसले आँखा चिम्लेर मेरो आँखामा हान्यो । म मरेतुल्य भएँ । लाग्छ आजसम्म मैले सम्झनजेल मलाई मेरा बाआमाले पनि एक थप्पड विर्सिएर पनि हानेका छैनन् । तर अचानक त्यो सार्वजनिक ठाउँमा यसरी मलाई पिट्दा दुनियाँ हुत्तिएर मेरो अनुहार हेरिरहेको थियो । सम्झेँ मेरो इमान खत्तम भयो । रोक्छु भन्दा भन्दै मेरा आँशु त्यो भिडमा झरिहाले । लाग्यो म त सधैं अरुको बारेमा लेखेको मान्छे आज कसैले मेरो बारेमा लेख्ने भयो । आँखाका आँशुहरु मैले कन्ट्रोल नै गर्न सकिन कसो कसो गेट भित्र छिरेछु । अवस्था निकै भयावह भयो । म सँग आएका मात्रै १५÷२० जना केटाहरु थिए । प्रहरी डरायो । सुनँे मलाई पिट्ने त्यो प्रहरीलाई डिएसपीले भगायो । म लगायत मेरा साथीहरु शेषकान्त, कृष्ण, बारी, आदि सबैले मलाई मोबाइल दिएर सहयोग गरे । मैले सुनेको थिएँ मान्छेले आपत विपतमा सबैभन्दा पहिले त्यो मान्छेलाई सम्झन्छ, जो प्रति ऊ विश्वस्त थिएँ होला साथीहरुलाई भन्दा हाम्रा नागरिक समाज बुटवलका अध्यक्ष तथा जनप्रतिवाद साप्ताहिकका अध्यक्ष पदम बहादुर कार्की सम्झिएँ । उहाँले मलाई धेरै कुरामा साथ दिनुभएको पनि थियो । दोस्रो पटक म ने.क.पा माओवादी जिल्ला सह–इन्चार्ज नेत्र नारायण शर्मा ‘‘रवी’’ लाई फोन गरे । उहाँले शरद वलीलाई पठाइदिने जानकारी गराउनुभयो । साथसाथै विद्यार्थी नेतालाई पनि जरुर बोलाउन भन्नुभयो । म विद्यार्थी नेताहरुलाई बोलाउने पक्षमा थिइन । तर सायद मेरो कुरा मनकुमार कनौजेले पक्कै बुझ्छन् जस्तो लाग्यो किनकि उनीसँग म आत्मियताको हिसाबले धेरै नजिक थिएँ । अपशोच उनको मोबाइल अफ रहेछ ।
दोस्रो पटक कल्पना भाटलाई सम्झिएँ । किनकि उनीसँग पनि राम्रै थियो । फेरि महिलाहरुको मन कोमल पनि हुन्छ । आग्रह पूर्वाग्रहहरु राख्दैनन् जस्तो लाग्यो तर उनले फोन उठाइनन् । सायद कार्यव्यस्तताले हुनसक्छ । म बाट झन नजिकिएका दाई चिरञ्जीवी चौहानलाई पनि बोलाएँ ।
मेरा साथीहरु र पदम सरसँग हामी इलाका प्रहरी कार्यालय जानुभन्दा पहिले उसले मसँग माफी मागेन तर एस.पी. अथवा त्यो भन्दा माथिल्ला बर्दीवालाहरुले उसलाई हकारेर उसले माफी माग्यो तर एकान्तमा । म पटक्कै सहमत भइन इजजतमा मेरो दाग लाग्यो त्यो पनि हजारौं मान्छेका अगाडि सडकमा उसले चाहिँ एउटा कुनामा गएर माफ माग्ने ? मैले पत्रकार सम्मेलन गरिदिने घोषणा गरेँ । आफू मातहतका पत्रकारलाई बोलाए पनि । पछि हामी सबै इलाका प्रहरी कार्यालयमा गयौं । आजभन्दा एकवर्ष अगाडि एकजना मधेशी व्यक्तिको कुरा मिलाइदिन गएको थिएँ । त्यहाँ प्रहरी प्रमुखले मलाई चिन्यो । र उतिखेरै त्यो डण्ठे पुलिसलाई बोलाएर माफी माग्न लगायो । सबैका सामुन्ने । त्यही मलाई थप्पड हान्ने प्रहरीले मित्रताको हात अगाडि बढायो । मैले सानो छँदा पढेको थिएँ शत्रुलाई पनि माफी दिनु भनेर । सायद त्यही गरेँ । र अन्तिममा उसलाई एउटा सुझाव पनि दिएँ ‘‘ कम्तिमा बर्दीको स्वाभिमान ख्याल राखिदिनुहोला ।’’